ओठको कालो घटाउने घरेलु उपाय – Mission
ओठको कालो घटाउने घरेलु उपाय
प्रकाशित मितिः आइतवार, फाल्गुन २, २०७२
:२०७२ फागुन २
एजेन्सी– पछिल्ला दिनहरुमा तपाईं आफ्नो ओठमा आएको परिवर्तनले चिन्तित त हुनु हुन्न ? निश्चय नै आफ्नो गुलाबी ओठ बिस्तारै कालो भएको कसलाई मन पर्छ र ? तर, यसबाट घरेलु तरिकाले पनि आफ्नो ओठको कालो हटाएर स्वभाविक चमक ल्याउन सकिन्छ । नियमित रुपमा स्वस्थ खाना खाँदा, व्यायम गर्दा र महंगा–महगां सामग्री ओठमा लगाउँदा पनि तपाईंको ओठ भएमा तपाईंले केही सजिलो घरेलु उपाय अप्नाउन सक्नुहुन्छ । ओठ चम्किलो बनाउने केही उपायः
साताको एकपल्ट रगेड्नेः तपाइको छालाबाट ओठको काला कोषहरुलाई हटाउनका लागि हरेक साता स्वभाविक रुपमा ओठ घोट्ने एउटा ब्रसले ओठ घोट्नुहोस् । यसले बिस्तारै तपाईंको ओठमा चमक ल्याउनेछ । जैतुनको केही थोपा र एक चिया चम्चा चिनी मिसाउनुहोस् र यसलाई ओठमा दिनहुँ लेपन गरेर हल्का रगेड्नुहोस् ।
कागतीः ओठको कालो दाग हटाउन र स्वभाविक चमक ल्याउन कागती पनि प्रयोग गरिन्छ । एउटा कागतीलाई बिस्तारै निर्चोनुहोस् र बेडमा जानुभन्दा अगाडि कागतीको जुसलाई ओठमा दल्नुहोस् । केही महिनासम्म यो सरल उपायलाई निरन्तरता दिनुहोस् । जुस निकाल्न असम्भव छ भने कागतीको सानो टुक्रा (स्लाइस) बनाउनुहोस् । थोरै चिनीलाई ओठमा छर्किनुहोस् र कागतीको टुक्राले ओठलाई रगेड्नुहोस् । यसले तपाईंको ओठको सबै काला कोषलाई हटाएर ताजा र चम्किलो बनाइदिन्छ ।
चुकन्दरःचुुकन्दरले पनि तपाईको ओठलाई गुलाफी र चम्किलो बनाउन सहयोग गर्छ । यसमा भएको स्वभाविक सेतो तत्वले तपाईको ओठ चम्किलो बनाउँछ । बेडमा जानुअघि चुकन्दर प्रयोग गर्नुहोस् र भोलिपल्ट राम्रोसँग सफा गर्नुहोस् । छुकन्दरको रातो रंगले तपाईको ओठलाई स्वभाविक रुपमा गुलाबी बनाइदिन्छ । बेडमा जानुअघि नियमित रुपमा यसको प्रयोग गर्नुहोस् ।
चुुकन्दरलाई अर्को तरिकाले पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ । छुकन्दर र गाजरको जुसको बराबर मात्रा मिसाउनुहोस । मिश्रित जुसलाई ओठमा प्रयोग गरी १० मिनेटसम्म हल्का घोटेर मन तातो पानीले सफा गर्नुहोस् । एक देखि दुई साता यस्तो विधि अप्नाउदा ओठ सुन्दर देखिन्छ ।
प्रकाशित मितिः आइतवार, फाल्गुन २, २०७२ 11:50:33 AM |
Prevआगलागीमा परी बालक घाइते
Nextपरवेज मुसर्रफलाई अस्पतालमा भर्ना